Isirka lagama hadlo Ingiriiska - BBC News Somali
Isirka lagama hadlo Ingiriiska
Dadka Ingriisku, ma ka hadli karaan arrimaha qoomiyadaha kala midabka ah, mise afkaa la qabtaa ?
Dalka UK waa dal ay ku nool yihiin bulshooyin kala duwan. Laakiin intee in le’eg, ayaa dadku ka hadli karaan arrimaha ku gedaaman midabka iyo qoomiyadaha dadka?
Haddaba barnaamij dokumantari ah oo lagii sii daayey TV ingiriis ah, ayaa guddoomiyihii hore ee ururka sinnaanta dadka ee dalkan ingiriiska Trevor Philips wuxuu ku sheegay arrimo badan oo xasaasi ah.
Waxaana ugu weynaa waxyaabaha xasaasiga ah, isagoo sheegay in halgankii loogu jiray in dadka madow iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay ay helaan xaqooda iyo ixtiraamka mujtamaca Ingiriiska dhexdiis ah, ay arrintaas keentay in wax badan aan laga hadli karin oo ku saabsan arrimaha dadka soogalootiga ah iyo qoomiyadaha kala duwan.
Waayo dadkii cadaanka ah ee ingiriiska ahaa waxay ka baqdeen in looga shakiyo takoor iyo cunsurunimo.
Haddaba wariyaha BBCda ee arrimaha Bullshada John McManus, ayaa eegaya dooddan kulul ee ka jirta dalkan Ingiriiska.
Haddaba, isagoo ahaa Guddoomiyaha Guddiga Sinnaanta ee qowmiyadaha laga badan yahay ee madow muddo toban sano ka hor ah, ayaa Trevor Philips waxaa uu usbuuc walba dhowr maalmood booqasho uu ku tagi jiray daafaha dalkan Ingiriiska si uu ula kulmo dadyoowga laga tiro badan yahay xubno ka mid ah.
Isagu waxaa uu ka soo Jeedaa qoys madow oo ka yimid jasiiradaha Karabiinka, waxayna shaqadiisu ahayd in uu dadka isu soo dhoweeyo, oo si fiican loo wada noolaado dhamaan dadka kala duwan ee dalkan ingiriiska kasoo jeedaa.
Lakiin, waxaa uu dhowaan qirtay inkastoo oo uu ogaa in ay kooxaha qaar fikrado xagjir ah qabeen hadana uusan isagu ka fal-celin. Kadibna, 2005 waxaa dhacay isqarxintii London oo ay ku dhinteen 52 qof, isla markaana qaar badani ku dhawacmeen, waxaana qaraxayada geystay Islamiyiin ku dhashay halkani oo ah Ingiriiska muslim ah.
Barnaamij dukumentari ah, oo magaciisa la yiraahdo (waxyaabaha aynaan dhihi karin ee khuseeya midabka dadka, lakiinse runta ah), ayaa uu Mr Phillips ku sheegayaa in haldoorka siyaasadda iyo saxaafadda ingiriisku ay aad uga baqdaan in ay ka hadlaan arrimaha qowmiydaha kala duwan, iyagoo ka baqa in lagu sheego in ay cunsuriyiin yhiin, oo ay dadka madaw neceb yihiin.
Waxaanu sheegnay in cabsidan laga baqayo arrimahani ay keentay laba arrimood, oo midda hore ay tahay in aan laga hadlin dhibatooyinka bulshada ama qowmiyadaas dhexdeeda ka jirta, kadibna xal looma helayo mar hadaan arrinkiiba toos looga hadlayn.
Midda labaadna, waxaa soo baxay dhaqdhaqaayo siyasadeed oo ka dhashay carada ay dareemeen dadka dhulkan u dhashay, gaar ahaan cadaanka Ingiriiska oo arkaya wadankoodii oo isbadalaya haddana aanay waxba ka dhihi karin.
Waxay u eg tahay arrintan in ay ka hadlayso tageerada badan ee uu helayo xisbiga UKIP ee dalka Ingiriisku, kaasi oo raba in uu xadido soogalootiga isla markaana raba in Ingiriiska uu ka saaro Midowga Yurub.
Qaar badan, oo ka tirsan musharaxiinta iyo tageerayaasha xisbigani, ayaa sheegaya in la cabudhiyey, oo aanay si xor ah uga hadlin dhibatooyinka dadka soo galootiga ahi ku hayaan ama culayska ay ku soo kordhiyeen bulshada Ingiriiska ah, sida guryaha iyo shaqooyinka dalka, haddii ay arrimahan ka hadlaanna loogu yeerayo cunsuriyiin.
Kadib markii ay dheceen dambiyo badan oo ku saabsan caruur la fara-xumeeyey iyo danbiyo galmada ah, oo ay qayb ka ahayeen xubno ka tirsan bulshooyinka laga tirada badan yahay, ayaa tooshka aad loogu ifiyey arrimaha ku saabsan qowmiyadaha madow iyo kuwa kale ee laga tirada badan yahay sida loola dhaqamayo.
Magaalada Rotherham ee waqooyiga Ingiriiska, ayaa kooxo ciyaal suuq ah, oo asalkoodu yahay bakistaan, waxay sanado badan ku xadguudbayeen hablo da’doodu yar tahay oo iska dhibaataysan.
Kadib markii baaritaan la sameeyay, waxaa la ogaaday in shaqaalaha arrimaha bulshada iyo booliisku ay indhaha ka qarsadeen arrimaha, iyagoo ka baqanaya in lagu tilmaamo cunsuriyaal.
Waxaa kaloo jirtay warbixin xaqiiqo raadis ah, oo laga qoray jirdilkii iyo dilkii gabar yar oo 8 jir ah oo la odhan jiray Victoria Climbie, oo ay dishay gabar eedo labaad u ahayd. Labaduba waxay ka yimadeen dalka Ivory –Coast – waxaa taana la ogaaday inay kooxdii qaabilsanayd wax ka qabshada arrimahan aysan cadaadiskii loo baahaa saarin, iyagoo isleh armaa la idin yiraahdaa waa cunsuriyaal.
James Dellingpole, oo ah taftiraha barta intarnetka Breitbart ee ka hadasha arrimaha, ayaa sheegay in Trevor Philips arrimahan uu ka hadlay ‘ay yihiin xaqiiq dhab ah’ waxaanu yiri BBC ma sii daynin karteen mowduuc kan la mid ah, iyadoo laga baqayo in la yiraahdo waa cunsuriyiin, wuxuuna yiri ninkii aan madow ahayn arrimahan sidan ugama hadleen.
Todobaadkii hore dalkan Ingiriiska, waxaa shaqada laga joojiyey soo jeediyahii barnamijka Top Gear Jeremy Clarkson oo lagu eedeeyey inuu feer ku ganay mid ka mid ah soosaarayaasha barnaamijkiisa.
Dad badan, oo Ingiriis ah, ayaa ka carooday waxaanay sheegeen in ay khatiyaan ka joogaan habka loogu yeero ‘sida saxda ah u hadal’ ama afka Ingriisda ‘political correcteness’.
Odhaahdan ‘sida saxda ah u hadal’ ayaa qofba meel ka taagan yahay, iyadoo dadka qaar u haystaan in ay tahay in aad si xurmad leh oo tifaftiran aad dadka ula hadasho, qaar kalena waxay u arkaan in ay tahay oraah lagaga hor tagayo doodda xorta ah .
Jeremy Clarkson, ayaa hore loogu ganaaxay inuu yiri ereyo xambaarsan cunsuriyad, oo ay ku jireen magacyada dalalka Thailand iyo Itoobiya.
James Dellinglope, oo ka hadlayey tageerada badan ee uu helay Jeremy Clarkson, ayaa sheegay in ay muujinayso ‘sida dadku uga daaleen in sidii carruurta mar walba wax loo sheego’. Waxaana uu sheegay in ‘dad badani u arkaan in uu yahay codka kaliya ee dhabta ah ee BBC jooga. Waxaanu u hadlaa siday dadku u hadlaan jooga mkhaayadaha iyo suuqyada dalkan ingiriiska’ .
Mawduucyada Xasaasiga ah